AKHRISO:- Wax Badan Ka Baro Xanuunka Gaaska Calooledka
Hiiraan Xog, Apr 18, 2018:- Maanta waxaynu soo qaadaneynaaa waxa uu yahay gaasku ( gastritis) waxa keena calamadaha lagu garto sida loobaaro iyo waliba sida lodaaweeyo. waa maxay gastric(gastritis)? Waa caabuq diiqa, ama boog ku timaadda dahaarka caloosha. Waxaa uu u noqon karaa mid si degdeg ah u dhaca (acute) iyo mid dabadheeraada(chronic). #Maxaa sababa gasric(gastritis)? Isticmaalka...
Hiiraan Xog, Mar 26, 2018:- THOMAS TUCHEL ayaa ka bedeli doona tababare Arsene Wenger shaqada kooxda Arsenal dhamaadka xili ciyaareedkaan. Majaladda Jarmalka ee Kicker, ayaa sheegay in tababare Tuchel qarka u saaran yahay inuu heshiis la galo madaxda kooxda ka dhisan Emirates. Tababarihii hore ee Borussia Dortmund Tuchel ayaa iska diiday fursad uu ku maamulo kooxda Bayern...
Hiiraan Xog, Mar 24, 2018:- Usain Bolt (31-jir) ayaa maanta ku biiray kooxda kubadda cagta ee jarmalka ah Borussia Dortmund kadib markii uu kasoo wareegay oo uu ka soo xiiso-beelay orodka oo uu ku caan baxay. Bolt ayaa kaalimaha koowaad ka galay orodka 100- iyo 200 mitir, waxaana uu ka haystaa biladda adduunka. Orodyahankan oo marnaba qarin in uu mar uun u ciyaari doono...
Hiiraan Xog, Mar 21, 2018:- (AFP) – Shortly after sunrise, a group of young women arrives at a football pitch in Mogadishu, where they shrug off their hijabs — some changing underneath the billowing veil — to reveal their team kit. Young Somali men stand nearby, some disapproving but all watching closely, as the women jog up and down, dribble a worn-out ball...
Halyeeygi hore ee Kooxda Arsenal Sol Campbell oo Hindisay Qorshe Lagu Celin Karo Mohamed Salah
Hiiraan Xog, Mar 19, 2018:- Halyeeygi hore ee kooxda Arsenal Sol Campbell ayaa sheegay inuu awoodi karo celinta gooldhaliyaha Liverpool Mohamed Salah. Salah ayaa afar gool dhaliyay kulankii Liverpool 5-0 kaga badiyeen kooxda Watford garoonka Anfield. Campbell wuxuu aaminsan yahay habka ugu fiican ee lagu celin karo Salah inay tahay in la xirto kaliya lugta uu ku ciyaaro. “Iyadoo...
AKHRISO:- Isku aadka Wareega 8 ad Champions League oo la qabtay
Hiiraan Xog, Mar 16, 2018:- Xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa sameeyay isku aadka wareega 8-da ee Champions League waxaana ka soo baxay kulamo aad u xiiso badan waxaana isku aaday kooxo aad u magac weyn. Kulamada ugu xiisaha badan ee ka soo baxay isku aadka ayaa kala ah kulanka u dhexeeya kooxaha Ingariiska ee lagu kala magacaabo Liverpool iyo Manchester City. Sidoo...
Hiiraan Xog, Mar 14, 2018:- Kooxda Sevilla ayaa soo tiigsatay quarter final-ka tartanka Champions League kadib markii ay si xarago leh u garaaceen Man United, Ben Yedder ayaana noqday geesiga kooxda reer Spain. Manchester United ayaa sameysay hal fursad qeybtii hore ciyaarta, waxaana u dhawaaday inuu gool dhaliyo Fellaini, balse Sevilla waxey aheyd kooxda mar walba kubadda...
Hiiraan Xog, Mar 11, 2018:- Al-Shabaab ayaa xiray inta badan Garoomadda lagu ciyaaro kubadda Cagta ee loo yaqaan (Salaxa) kadib markii muddooyinkii dambe ay wadeen xiriiro kala duwan oo ay la sameynayeen Milkiilayaasha goobaha lagu ciyaaro Kubadda Cagta. Horay Al-Shabaab waxa ay u xireen goobo lagu Ciyaaro Kubadda Cagta oo ku yaallo Degmooyinka, Dayniile, Yaaqshiid, Kaxda...
Hiiraan Xog, Mar 7, 2018:- Kooxda Arsenal 4-kulan ee ugu dambeesay oo ay cayaartay dhamaan tartamada kala duwan waa laga badiyay kooxdana jawi kacsan ayay bartanka kaga jirta. Arsenal waxay 33-dhibcood ka hooseeyaan naadiga Man City oo horyaalka Ingiriiska hogaamineyso halka ay 25-dhibcood ka sareeyaan kooxda West Brom oo horyaalka ugu hooseyso. Hadaba Arsenal Khamiista...
Lionel Messi oo sheegay in sanadkan uu la tartamayo Neymar JR
Hiiraan Xog, Mar 4, 2018:- Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa inuu Neymar JR u arko xiddiga kula tartami doona abaalmarinta Ballon d’Or sannadkaan, inkastoo ay xaqiiqadu tahay inuu Messi dhibsaday markii uu arkay Cristiano Ronaldo oo barbareynaya rikoorkiisii hanashada abaalmarinta Xiddiga Sannadka Adduunka. Messi ayaa ku riyaaqaya 14 sanno oo uu ka tirsan yahay kooxda...